by pamusoro 18-08-29
Kazhinji, kana uchida kunwa doro chando uye chinwiwa pose waunobuda, nyore chitoro mumugwagwa ndiyo yakanakisisa sarudzo. Nzira nyore vanakidzwe Cold zvinobata apo musasa kunze, mugungwa kana mugwenga ndiko kuvimba nemotokari firiji. Paaiva-motokari fridges rinogona kuzorodza, chando ...
Kushandisa inotakurika firiji
1. pakakodzera yokufamba, mitambo, yokufaranuka hove uye kurovedza zvokudya uye chinwiwa kuchengetedzwa uye Refrigeration. 2. Zviri akakodzera refrigerated kutakurwa yokudzivirira uye mishonga kubudikidza zvokurapa, utano, utano uye ekudzivirira dambudziko madhipatimendi. 3. pakakodzera kuti mhuri, motokari uye zvokurapa ...
Zvinoumba inotakurika firiji
1. nganonyorwa uye simba rakasiyana, applicability. No simba wedzerai, nyore kutakura, kwete chete inogona kushandiswa pamusha, kunyanya yakakodzera motokari uye kufamba; 2. Beautiful uye rupo, vane simba pamwaka maitiro. Small inotakurika uye pusa firiji riri guru uye mativi mumaoko, akanaka uye attrac ...